အမိုက်စားဖက်ရှင်လေး နဲ့ လှသွေး ကြွယ်ပြီး ပုရိသတွေကို ရင်ခုန်စေပြန်တဲ့ “ချောကလျာ” – Shwe Sar
အမိုက်စားဖက်ရှင်လေး နဲ့ လှသွေး ကြွယ်ပြီး ပုရိသတွေကို ရင်ခုန်စေပြန်တဲ့ “ချောကလျာ”
By Shwe S NPosted on November 21, 2021
ပုရိသတွေ စွဲမက်စေမယ့် မို့မောက် ပြည့်တင်းနေ တဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာ အလှ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ် ချောကလျာ ကို သိကြမယ် ထင် ပါတယ်နော်။ မော်ဒယ်လ်လောက ကိုဝင်ရောက်တာ မကြာသေးပင်မယ့် ယောက်ျားလေး ပရိသတ်အများအပြားရဲ့ အားပေးဝန်းရံမှုကို ရရှိ ပိုင်ဆိုင်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာဆက်ဆီ ကျပြီးညို့ အားပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင်နိုင် သူလေးဖြစ်တာကြောင့် လက်ရှိ ဖေ့ဘွတ်စာ မျက်နှာမှာ ရေပန်းစား လူကြိုက်များကာ ပုရိသတွေ ဝန်းရံနေကြတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်တွေ ကို လူမှုကွန် ယက်ဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှာ မကြာခန တင်လေ့ရှိ တာတွေ့ရပါတယ်။
ယခုမှာတော့ အမိုက်စား ဖက်ရှင်လေးနဲ့ မြင်သူ တကာ ရင်သပ်ရှုမော ဖွယ် အလှတွေ ပေါ်လွန်နေတဲ့ ပုံလေးတွေကို “မင်းပြောထားတဲ့အချိန်လေးတွေရောက်ဖို့ … အစောကြီးထဲကမျှော်လင့်နေလို့ .. ခံစားချက်တွေအလွန်ကျွံပါအချစ်ရာ🎼 ” ဆိုတဲ့ကပ်ရှင်လေးနဲ့အတူ ချပြလာ ခဲ့ပါတယ်နော်။ ချောကလျာ ရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေးတွေ ကို ပရိတ်သတ်တွေ အတွက်ပြန်လည်မျှဝေပေး လိုက်တယ်နော်..။
အခုလို အဆုံးထိ ဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် ကျွန်တော် တို့ Page မှ အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နော်…နောက်များ မှာလည်း အခုလိုဆယ်လီ တို့ရဲ့ သတင်းများနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီတင်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Page လေးကို Like & See First လေးလုပ် ပေးသွားကြပါအုံးနော်….
Source : Chaw Kalayar Facebook
ပုရိသတှေ စှဲမကျစမေယျ့ မို့မောကျ ပွညျ့တငျးနေ တဲ့ ကိုယျခန်ဓာ အလှ ကို ပိုငျဆိုငျ ထားတဲ့ မျောဒယျလျ ခြောကလြာ ကို သိကွမယျ ထငျ ပါတယျနျော။ မျောဒယျလျလောက ကိုဝငျရောကျတာ မကွာသေးပငျမယျ့ ယောကျြားလေး ပရိသတျအမြားအပွားရဲ့ အားပေးဝနျးရံမှုကို ရရှိ ပိုငျဆိုငျထားသူလညျးဖွဈပါတယျ။ သူမဟာဆကျဆီ ကပြွီးညို့ အားပွငျးပွငျး ဆှဲဆောငျနိုငျ သူလေးဖွဈတာကွောငျ့ လကျရှိ ဖဘှေ့တျစာ မကျြနှာမှာ ရပေနျးစား လူကွိုကျမြားကာ ပုရိသတှေ ဝနျးရံနကွေတာ လညျးဖွဈပါတယျ။သူမရဲ့ အမိုကျစား ပုံရိပျတှေ ကို လူမှုကှနျ ယကျဖဘှေ့တျပျေါမှာ မကွာခန တငျလရှေိ့ တာတှရေ့ပါတယျ။
ယခုမှာတော့ အမိုကျစား ဖကျရှငျလေးနဲ့ မွငျသူ တကာ ရငျသပျရှုမော ဖှယျ အလှတှေ ပျေါလှနျနတေဲ့ ပုံလေးတှကေို “မငျးပွောထားတဲ့အခြိနျလေးတှရေောကျဖို့ … အစောကွီးထဲကမြှျောလငျ့နလေို့ .. ခံစားခကျြတှအေလှနျကြှံပါအခဈြရာ🎼 ” ဆိုတဲ့ကပျရှငျလေးနဲ့အတူ ခပြွလာ ခဲ့ပါတယျနျော။ ခြောကလြာ ရဲ့ အလှ ပုံရိပျလေးတှေ ကို ပရိတျသတျတှေ အတှကျပွနျလညျမြှဝပေေး လိုကျတယျနျော..။
အခုလို အဆုံးထိ ဖတျရှုပေးတဲ့အတှကျ ကြှနျတျော တို့ Page မှ အထူးပငျ ကြေးဇူးတငျရှိပါတယျနျော…နောကျမြား မှာလညျး အခုလိုဆယျလီ တို့ရဲ့ သတငျးမြားနှငျ့ ပွညျတှငျးပွညျပသတငျးမြားကို အခြိနျနှငျ့တပွေးညီတငျဆကျပေးမှာ ဖွဈတဲ့အတှကျကြှနျတျောတို့ Page လေးကို Like & See First လေးလုပျ ပေးသှားကွပါအုံးနျော….
Previous post အသည်း ယားစရာ ပုံစံအမျိုးမျိုး လုပ်ပြနေ တဲ့ မတ်မတ်သင်ဇာ ရဲ့ ဗီဒီယို
Next post အကြမ်းစား ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်း နဲ့ ပရိသတ်တွေ အံ့ဩမှင်သက်သွားအောင် အလန်းစား ဖြစ်နေတဲ့ အေးမြတ်သူ